Mesh Monel, oo sidoo kale loo yaqaano Monel filter mesh.
Mesh silig Monel waa walxo aluminium ah oo ku salaysan nikkel oo leh iska caabin wanaagsan oo biyaha badda ah, dareerayaasha kiimikada, koloriin sulfur ammonia, chloride hydrogen, warbaahinta kala duwan ee acidic sida sulfuric acid, hydrofluoric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, organic acid, warbaahinta alkaline, cusbo iyo milix dhalaalaysa.
Astaamaha shaashadda shaandhada birta ah ee aan birta lahayn
1. Aashitada wanaagsan, alkali iyo caabbinta daxalka;
2. Xoog sare, xoog xoog leh oo xoog leh, adag oo xirashada caabbinta, waara;
3. Iska caabinta oksaydhka heerkulka sare, heerkulka magaca ah ee 30 shaashadda birta ah waxay gaari kartaa 1150 ℃;
4. Heerkulka caadiga ah ee caadiga ah, taas oo ah, farsamaynta caagga ah ee fudud, si suurtogalnimada isticmaalka shaashadda birta aan la taaban karin ay kala duwan tahay;
5. Dhamaystir sarreeya, ma jiro daaweyn dusha sare ah, dayactir ku habboon oo fudud
Qalabka: mesh silig bir ah oo aan lahayn (alaabtan), agabka kale waa marada xariirta madow, shaashadda birta ah iyo mesh silig bir galvanized ah
Astaamaha alaabta: mesh lebbis, caabbinta xidhashada wanaagsan, xoog sare, adeeg dheer, curlla'aan, fududahay in la isticmaalo, dhumucdiisuna waxay tahay shaashadda, caabbinta aashitada iyo alkali, iska caabin daxalka, gees siman, ma laha dhaawac gacanta ah
Mesh silig bir ah oo aan lahayn ayaa loo isticmaalaa baadhista iyo sifaynta hoos yimaada xaaladaha deegaanka ee aysiidhka iyo alkali. Waxa loo isticmaalaa sida mesh dhoobada warshadaha batroolka, warshadaha fiber kiimikaad, shaashadaha iyo korantada.
Monel 400 waa alloy u adkaysta daxalka oo leh qiyaas badan, codsi ballaadhan iyo sifooyin dhammaystiran. Daawaha waxa uu leeyahay iska caabin aad u fiican oo daxalka ah ee hydrofluoric acid iyo gaaska fluorine dhexdhexaad ah, iyo sidoo kale waxa uu leeyahay iska caabin aad u fiican oo u adkaysta khamriga alkali kulul. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale u adkaysataa daxalka xal dhexdhexaad ah, biyaha, biyaha badda, jawiga, xeryahooda organic, iwm. Muuqaal muhiim ah oo ka mid ah alloy-ga ayaa ah in guud ahaan aysan soo saarin dildilaaca daxalka culeyska waxayna leedahay waxqabad goyn wanaagsan. Qaab dhismeedka Monel 400 alloy waa hal waji oo adag oo leh awood sare.
Monel400 Alloy town screen ayaa leh meelaha soo socda ee codsiga
1. Dhuumaha biyaha iyo tuubada uumiga ee warshadda korontada oo aan kala go 'lahayn
2. Beddelka biyaha badda iyo uumiga
3. Sulfuric acid iyo hydrochloric acid deegaanka
4. Saliid cayriin oo la jeexjeexo
5. Usha bamka iyo mashiinnada qalabka loo isticmaalo biyaha badda
6. Qalabka loo isticmaalo warshadaha nukliyeerka ee soo saarista uranium-ka iyo kala-soocidda isotope
7. Samaynta bambooyin iyo mashiinnada qalabka wax soo saarka hydrochloric acid
Hore: Mesh nikkel ah oo tayo sare leh 10-300 mesh
Xiga: 14-300 mesh koronto-magneeteedka gaashaanka qurxiya shabag naxaas ah
Tilmaamaha mesh silig alxanka ah Specification Wire dia Width Material 1x1 0.70mm-3.0mm 0.914m-2.13m SS304 ama SS316 3/4x3/4 0.70mm-2.5mm 0.914m-1.524m/SS306m/SS306mm 1.2mm 0.914m-1.524m SS304 ama SS316 1/2x1/2 0.70mm-2.0mm 0.914m-2.13m SS304 ama SS316 1/3x1/3 0.80mm-1.2mm 0.34x1SS 0.91mm 4 0.60mm-1.2mm 0.914m-1.524m SS304 ama SS316 1/4x1/2 0.60mm-1.2mm 0.914m-...